Sawiro:Olalaha nadaafada ee Garoowe oo korortay – SOOMAALPEDİA
Olole Nadaafadeed oo soconaya mudo bil ah ayaa saaka ka bilowday xaafadaha magaalada Garoowe ee xarunta Maamul gobaleedka Puntland,waxaana soo qaban qaabisay dowladda hoose ee degmada Garoowe.
Xoghaya Dowlada hoose ee Garoowe Cabdiqafar Cabdirixmaan Axmed ayaa Sheegay inay har iyo habayn u taagan yihiin inay ka shaqeeyan nadafada Magalada waxaana uu ugu baaqay Shacabka Garoowe inay isku duubni u wada shaqeeyaan.
Duqa Degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir ayaa sheegay inay ka shaqeeynta Nadafada Magalada Garoowe ay ka danbaysay go aamadi dhawaan ka so baxdey Kal fadhigii 20-aad ee golaha Degmaada garoowe.
Ololahan Nadaafadeed ee saaka ka bilowday Magaalada Garoowe ayaa noqon doona mid qashinka looga nadiifin doono dhamaan xafadaha ay ka kooban tahay Magalada Garoowe ee Casamuda Puntland.
Posted in Dhiirigelin, Social, Society
Gaalkacyo oo u dhoofisa khudaar magaalada Muqdisho